uShwankathelo ngolawulo oluphilayo lwee nkumbi
Eyona ndlela yendalo kwaye engabiziyo ngokwe mali yokulawula inkumbi kukukhusela intshaba zendalo nee nkumbi. Ngokunjalo, ababa babulali banganceda ukulawula inkumbi kwisivuno sakho.
Uninzi lo hlobo olunye kwizityalo lungachaza ukunga lingani ngokwe ndalo kuye kuphazamiswe kwaye oku kungathetha okokuba abatshabalalisi bendalo benkumbi abekho, lilonke ezendalo azonelanga kulongingqi. Ukwahlukana ngezendalo kuthetha okokuba iintlobo ezininzi zezidalwa (umzekelo: izityalo, iintaka, izinambuzane, iintsholongwane) ziphila emhlabeni. Ezi bulalayo ziphila kwindawo eziphezulu kwi zityalo ezahlukileyo.
Nalapho amafama asuke kwindlela yokulima evelisa uhlobo olunye lwesityalo.
Izibulali zendalo zenkumbi ziquka: Izibulali zezinambuzane ezifana noqongqothwane nentethe ezincukuvayo, izirhubuluzi (Amacikilishi), nezixhumayo (amasele), izigcawu.
Ukwahlula hlulwa kwezityalo kungenziwa ngcono ngokunga fafazi izitshabalalisi ze zibambuzane nokutyala okanye ukungatshabalalisi izityalo zendalo ezinokubaluncedo kwizibulali zendalo. Oku kungenziwa ngokutyala iheji njengezi rhangqi zendalo, ukugcina iindawo zokukhulisa izityalo ukuze zibenomtsalane umzekelo. Ukufafaza isibulali kwi zinambuzane akubulali iinkumbi kuphela, kodwa neentshaba zendalo, ziye zibe nonyamezelo kwinkumbi nendawo zamanzi ezinethyefu.
Zimbini iindlela zokulawula iinkumbi: yendalo yokulawula, lawulo lwendalo
Indlela Edaliweyo Yolawulo lwe Nkumbi
Ezinye izityalo ezifana ne Khaki bush (Tagetes minuta okanye mbanje ngesi Ndebele) Gcina izinambuzane kude, logama imarigold ingaxinzelela inematodes ezingama 14 kwizityalo nomhlambi we nematodes ne rot-knot nematodes eziye zichaphazeleke kakhulu. Ukuze imarigold zinxinzelele ngempumelelo inematodes, kufuneka ityalwe noko kwinyanga ezimbini phambi kwesityalo esisemngciphekweni sityalwe.
Izityalo ezithile zingalawula inkumbi ngezindlela zilandelayo:
Ukunxibisa isivuno ngoku tyala nezinye. Izinambuzane azikwazi ukunukisa isivuno, okanye ziyabalekiswa livumba leso sityalo sikhaphayo. Umzekelo, irosemary igxotha impukane kwi khaphetshu.
Seka izityalo (umzekelo izityalo) ezino mtsalane kwizinambuzane (ezifana nenyosi).
Tyala isikhuseli sendalo kwisivuno.
Kwi gadi encinci, inkumbi zingalawulwa ngentwana ye khaki bush. Ichilli ne ntwana ye garlic inga fafazwa ukugxotha izinambuzane.
Izinambuzane zidlala indawo ebalulekileyo kwindalo nakwindawo ezincinci ezithile efama kwaye kufuneka kukhunjulwe okokuba hayi zonke izinambuzane ziinkumbi. Izinambuzane zigcina indalo iphilile, na njengoko kubhaliswe ngaphezulu, nceda ukunciphisa ngo ‘lawulo lwendalo’. Izinambuzane eziluncedo zitya i-aphids, mites, caterpillars, neminye imibungu etya izityalo kodwa inge nabungozi eluntwini, kwizityalo nezilwanyane.
Izinambuzane eziluncedo ezifana ne ladybird beetles Chilocorus nigritus ne Cryptolaemus montrouzieri ne nyosi ezilumayo Aphytis lingnanensis ne Coccidoxenoides perminutus zi zalelwa ukuthengiswa kwaye zingakhuliswa zisetyenziswe efama njenge zithinteli zendalo.